အကောင်းဆုံး Gaming Phone (သို့) Asus ROG Phone ကို Hand-on လေ့လာကြည့်ခြင်း
6 Jun 2018 . 4:03 AM
Asus ကနေ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နေ့က လက်ရှိ Gaming Smartphone ဈေးကွက်ကို ကိုင်လှုပ်သွားခဲ့တဲ့ Asus ROG (Republic of Gamers) Phone ကို အခု နည်းပညာပိုင်းကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအတော်များများသိရှိပြီးနေလောက်ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် တကယ်ကို Asus ROG Phone က Gaming Phone တွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးဖြစ်လာတာလား? ဈေးနှုန်းအရ မြင့်မားတယ်လို့ ပြောလို့ရမလား? အသုံးပြုရတာရော ဘယ်လိုအခြေအနေရှိမလဲ?
ဒီအတွက်ကို Asus ရဲ့ ဖိတ်ကြားမှုကြောင့် Computex ပွဲကို တက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Akhayar-Tech ကနေ ဒီ Asus ROG Phone ကို Hands-on Experience ရယူဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ ဘယ်လိုမျိုး ခံစားရသလဲဆိုတာကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Asus ROG Phone ကို ကြေညာတာကို စစခြင်းကြားလိုက်ရတဲ့အချိန် သူ့မှာ ပါဝင်တဲ့ Specifications တွေ၊ Features တွေနဲ့ တခြား Add-on Accessories တွေကိုလည်း မြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ဒီ Asus ROG Phone က ကျိန်းသေပေါက် လက်ရှိ စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းတွေအားလုံးကို ရိုက်ချိုးပြီး Gaming Phone ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုပြီး ပြလိုက်သလိုပါပဲ။ စတိတ်စင်တစ်ခုလုံးကို လက်ခုပ်သံတွေနဲ့ ပြည့်သွားစေခဲ့တာပါ။
အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ Akhayar-Tech အနေနဲ့ Asus ROG Gaming Phone ကို အနီးကပ်ကိုင်သွယ်စမ်းသပ်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်း တကယ်ကို စွမ်းဆောင်ရည်အကြမ်းစား Gaming Phone တစ်ခုရဲ့ ခံစားမှုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အရင်ဆုံး Hand-on Experience ကို မပြောခင် Asus ROG ဖုန်းအကြောင်း သိပြီးဖြစ်တဲ့သူတွေရော၊ မသိသေးတဲ့သူတွေရောအတွက် Asus ROG Phone ရဲ့ Specifications တွေကို အနည်းငယ်အရင်ပြောပါမယ်။
Asus ROG Phone Game Center
စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းကို အလေးပေးတဲ့ Gaming Phone တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် Asus ROG Phone က လက်ရှိမှာ အမြန်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ Qualcomm Snapdragon 845 Processor ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထူးခြားတာက Processor ကို 2.96Ghz အထိ Overclocked ပြုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် SD 845 ဖုန်းချင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်တောင် Asus ROG Phone က ပိုပြီး မြန်ဆန်နေမှာပါ။ ဒါကလည်း Qualcomm SD 845 သုံးထားတဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာ ပထမဆုံးပါ။ RAM အနေနဲ့ 8GB DDR4 ပါမှာဖြစ်ပြီးတော့ Internal Storage ကို 128GB ဒါမှမဟုတ် 512GB ဆိုပြီး ထုတ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Asus သာ ROG Phone ဖုန်းကို ဈေးကွက်အနှံ့မှာ ရောင်းချမယ်ဆိုရင် အခု ROG Phone က ပထမဆုံး 512GB Storage နဲ့ Mass Production ဖုန်းတစ်ခုဖြစ်လာဦးမှာပါ။
Asus က ပြောသွားသလိုပဲ Gaming Phone တစ်လုံးမှာ Performance တင်မကပဲ Visual ပါ ကောင်းမွန်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အရင်က Razer Phone မှာ 120Hz Refresh Rate ကိုအသုံးပြုလာတာကိုတွေ့ခဲ့ရပေမယ့် LCD Panel ဖြစ်နေတဲ့အတွက် AMOLED တွေလိုမျိုး ကောင်းမွန်တဲ့ Visually Appealing မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အခုအချိန်မှာတော့ Asus ကနေ ROG ဖုန်းမှာ AMOLED Panels တွေအပေါ်ယခင်က ယူဆထားတဲ့ အရာတွေကို အကုန်လုံးရိုက်ချိုးပစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲ? Asus ROG Phone ရဲ့ Display က လက်ရှိဈေးကွက်အတွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ စမတ်ဖုန်းအများစုလိုပဲ 6″ Full HD+ 18:9 Display ပါ။ ဒါပေမယ့် AMOLED Panel ကို အသုံးပြုထားပြီးတော့ လက်ရှိ AMOLED Display သုံးထားတဲ့ ဘယ်ဖုန်းမှာမှ မရရှိနိုင်သေးတဲ့ 90Hz Refresh Rate ကို ရရှိနေအောင် ပြုလုပ်ပေးထားတာပါ။ ဒါတင်မဟုတ်သေးပဲ HDR Support ၊ 1ms Response Time တွေအပြင် Color Accuracy ကလည်း 108% DCI-P3 ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် လက်ရှိမှာ စွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံး AMOLED Display တစ်ခုဆိုရင်လည်း မှားမယ်မထင်ပါဘူး။
ကျန်တဲ့ Gaming အတွက်အရေးကြီးတဲ့ Features တွေအနေနဲ့ကတော့ 4000mAh Battery ကိုမှ ဖုန်းကို Heat မတက်အောင် အားသွင်းပေးနိုင်တဲ့ Asus HyperCharge နည်းပညာ၊ QC 4.0+ Support ၊ USB Power Delivery Fast Charging စတဲ့ နည်းပညာတွေ၊ Gigabit Download Speed အထိ Support ပေးတဲ့ Wi-Fi 802.11ad ၊ Dual Front Facing Stereo Speaker with Smart Amplifier ၊ DTS HeadphoneX 7.1 Virual Surround Sound Support ၊ Bluetooth 5.0 ၊ Fingerprint Scanner ၊ NFC နဲ့ Bluetooth 5.0 စတဲ့ နည်းပညာတွေ အပြည့်ကို ပါဝင်နေတာပါ။
Camera ကတော့ Asus ROG Phone ရဲ့ အဓိကအားသာချက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Asus က 12MP + 8MP (120° Wide Angle) Dual Camera စနစ်ကို နောက်ကျောဘက်မှာတပ်ဆင်ထားပြီးတော့ အရှေ့ဘက် Selfie Camera ကတော့ 8MP တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ Pre-production Model ဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက် ကင်မရာပိုင်းကိုတော့ သေချာမပြောနိုင်သေးပေမယ့် Augmented Reality ကို Support လုပ်တဲ့ Camera စနစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ သေချာပါတယ်။
Specifications ပိုင်းတွေကို ပြောပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်အရာတွေက Asus ROG Phone ကို အကောင်းဆုံး Gaming Phone ဖြစ်တယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ Hands-on Experience ကို မျှဝေသွားပါမယ်။
အရင်ဆုံး စစခြင်း ROG Phone ကို ကိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဒီဖုန်းက Premium Flagship ဖုန်းဖြစ်ပြီးတော့ Gaming အတွက် ရည်ရွယ်တယ်ဆိုတာက သိသာနေပါတယ်။ ဖုန်းရဲ့ နောက်ကျောဘက်မှာ ရှိတဲ့ ROG Logo ၊ ဒီဇိုင်းနဲ့ လိုက်ဖက်အောင် ဘယ်မှာမှ မတွေ့ရသေးတဲ့ Fingerprint ပုံစံနဲ့ ကင်မရာ ဒီဇိုင်းတွေက ROG Gamers တွေတင်မဟုတ်ပဲ Gaming Phone တွေကို စိတ်မဝင်စားတဲ့သူတွေကိုတောင် စွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီဇိုင်းအပြင် Asus ROG Phone ကို အကောင်းဆုံး Gaming Phone လို့ပြောလို့ရသွားတဲ့ အချက် ၃ ချက်ရှိပါတယ်။
အရင် ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ သေးငယ်တယ်ဆိုပေမယ့် စမ်းသပ်အသုံးပြုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ တကယ်ကို ကွဲပြားသွားစေတဲ့အချက်တွေပါ။ အဲ့ဒါက Ultrasonic AirTriggers နဲ့ Advanced force-feedback haptics စနစ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Ultrasonic AirTriggers ဆိုတာက ဖုန်းကို Controller သီးသန့်တပ်စရာမလိုပဲ Controller တစ်ခုနဲ့ ဆော့ကစားနေရသလို ဖုန်းရဲ့ ထောင့်တွေကို ထိပြီး ခလုတ်အနေနဲ့ ထားနိုင်တဲ့ Function ပါ။ Advanced force-feedback Haptics Engine ကလည်း Vibration ကို ဂိမ်းထဲမှာ Immersive ဖြစ်သွားအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်တာကို တွေ့ရပါတယ်။
Asus ROG Phone TwinView Dock with AeroActive Cooler
ဒုတိယတစ်ခုကတော့ ပိုပြီး လက်တွေ့ကျပါတယ်။ ဖုန်းကို ဂိမ်းအကြာကြီးဆော့နေလို့ ဖုန်းပူလာပြီး ဆက်မဆော့နိုင်တော့ပဲ ဖုန်းကို ချထားလိုက်ရတာ၊ ဒါမှမဟုတ် Air-con အောက်၊ ပန်ကာရှေ့မှာ သွားပြီးဆော့ဖူးကြမှာပါ။ အဲ့ဒီအတွက် Asus က ROG Phone မှာ GameCool Vapor-chamber Cooling System ကို အသုံးပြုထားတယ်။ ဒါတင်မကသေးပဲ AeroActive Cooler ကိုလည်း ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။
အခု AeroActive Cooler က ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုရင် ROG Phone ရဲ့ ဘေးဘက်မှာပါဝင်တဲ့ Side Port ကနေ ချိတ်လိုက်ပြီးတော့ Cooler မှာပါတဲ့ Fans က ဖုန်းရဲ့ Heat တက်တာတွေကို ဖယ်ရှားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်၊ Fan Speed ကိုလည်း ဖုန်းကနေပဲ ထိန်းချူပ်နိုင်ဦးမှာပါ။ ဒါက Laptop တွေမှာ Cooling Fan ခံသလိုပဲ ရိုးရှင်းပြီးတော့ အလွန်နည်းလမ်းကျတဲ့ Heat ဖြေရှင်းနည်းပါ။ ဒါတင်မကသေးပဲ AeroActive Cooler ကို တပ်လိုက်ပြီဆိုတာရင် ဖုန်းရဲ့ ဘေးဘက်အလယ်ကနေ အားသွင်းနိုင်တဲ့ USB Type C Port နဲ့ 3.5mm Audio Port တွေပါ အပိုရရှိဦးမှာပါ။ အဲ့ဒီအတွက် ဂိမ်းဆော့နေရင် သီချင်းနားထောင်တာ၊ ဖုန်းအားသွင်းနေရင်လည်း လက်က အောက်မှာ ရူပ်နေတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Accessories တွေပါ။ Asus က ROG Phone နဲ့ တွဲသုံးနိုင်တဲ့ Accessories တွေကိုပါ တပါတည်းမိတ်ဆက်သွားခဲ့ပြီး ဒီအတိုင်း သာမန် Joystick တွေတင်မဟုတ်ပဲ တော်တော်လေးကို အလားအလာရှိတဲ့ Accessories တွေပါ ထုတ်လုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
အခု Accessories တွေကတော့ TwinView Dock ၊ Mobile Desktop Dock နဲ့ Gamevice Controller with WiGig Dock တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
အခု Accessories တွေထဲမှာ စိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းဆုံးကတော့ TwinView Dock ပဲဖြစ်ပြီး အဲ့ဒါက ROG Phone ကို တူညီတဲ့ နောက်ထပ် 6″ 90Hz Refresh Rate AMOLED Panel တစ်ခုကို ထပ်ပြီး တပ်ဆင်ပေးလိုက်သလိုပါပဲ။ အဲ့ဒီအတွက် Screen တစ်ခုမှာ ဂိမ်းဆော့နေရင်း တစ်ခုမှာ စာရိုက်နေတာ ဒါမှမဟုတ် ဂိမ်းတစ်ခုထဲကိုပဲ အောက်ဖက်က Display မှာဆော့နေပြီး အပေါ်က Display မှာ Map ဖွင့်ထားတာ စတဲ့ Cheat လုပ်တယ်လို့တောင်ပြောနိုင်တဲ့ Features တွေကို သုံးနိုင်မှာပါ။
Mobile Desktop Dock ကတော့ Samsung Dex လိုမျိုး Desktop အနေနဲ့ ပြောင်းလဲပေးတာဖြစ်ပြီးတော့ Gamevice Controller တစ်ခုနဲ့ WiGig Dock ကတော့ ကိုယ့်ဖုန်းမှာ ဆော့ကစားနေတာကို Wi-Fi ကနေ Streaming ပြုလုပ်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Asus ဟာ အခု ROG Phone ကို ရောင်းချမယ့်အချိန်ကို အတိအကျပြောကြားထားခြင်းမရှိသေးပေမယ့် ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ (မြန်မာငွေ ၁၃ သိန်း) ဝန်းကျင်ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ ဒါက ဖုန်းတစ်ခုထဲအတွက်ဆိုရင်တော့ လက်ရှိ Flagship ဖုန်းတွေထက်တောင် များပြားနေတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း Asus ဟာ Gaming အတွက်ကို သိသိသာသာ စွမ်းဆောင်ရည်တစ်ခုထဲတင်မဟုတ်ပဲ Display ၊ Features တွေ ၊ 512GB Storage ၊ ဒါ့အပြင် Accessories တွေကိုပါ လုံးဝ အစွမ်းကုန်ကန့်သတ်ချက်တွေကို ဖယ်ရှားခဲ့ပြီးတော့ လက်ရှိမှာ အကောင်းဆုံး Gaming Phone ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို ပြသသွားခဲ့တာပါ။
အခု Asus ရဲ့ ROG Phone ကို စမ်းသပ်ကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုက ခေါင်းထဲမှာ ကျန်နေခဲ့ပါတယ်။
“Gaming Phone တွေက အခုလိုမျိုး သာမန် Flagship တွေနဲ့ ယှဉ်ရင်တောင် လုံးဝကွာခြားသွားတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိနေပြီ… ဒါပေမယ့် လက်ရှိ Mobile Games တွေအတွက် လုံးဝ Overkill ဖြစ်နေတဲ့ Asus ROG Phone ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အထိ လိုအပ်တဲ့ Console အဆင့် AAA Title Mobile Game တွေရဲ့ အနာဂတ်ကရော ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ?”
Zawyè (Tech Associate Editor)
Asus ကနေ ပွီးခဲ့တဲ့တဈနကေ့ လကျရှိ Gaming Smartphone ဈေးကှကျကို ကိုငျလှုပျသှားခဲ့တဲ့ Asus ROG (Republic of Gamers) Phone ကို အခု နညျးပညာပိုငျးကို စိတျဝငျစားတဲ့သူတှအေတျောမြားမြားသိရှိပွီးနလေောကျပါပွီ။ ဒါပမေယျ့ တကယျကို Asus ROG Phone က Gaming Phone တှထေဲမှာ အကောငျးဆုံးဖွဈလာတာလား? ဈေးနှုနျးအရ မွငျ့မားတယျလို့ ပွောလို့ရမလား? အသုံးပွုရတာရော ဘယျလိုအခွအေနရှေိမလဲ?
ဒီအတှကျကို Asus ရဲ့ ဖိတျကွားမှုကွောငျ့ Computex ပှဲကို တကျရောကျဖွဈခဲ့တဲ့ Akhayar-Tech ကနေ ဒီ Asus ROG Phone ကို Hands-on Experience ရယူဖွဈခဲ့ပွီးတော့ ဘယျလိုမြိုး ခံစားရသလဲဆိုတာကို ပွနျလညျဝမြှေပေးသှားမှာပဲဖွဈပါတယျ။
Asus ROG Phone ကို ကွညောတာကို စစခွငျးကွားလိုကျရတဲ့အခြိနျ သူ့မှာ ပါဝငျတဲ့ Specifications တှေ၊ Features တှနေဲ့ တခွား Add-on Accessories တှကေိုလညျး မွငျလိုကျရတဲ့အခြိနျမှာ ဒီ Asus ROG Phone က ကြိနျးသပေေါကျ လကျရှိ စမတျဖုနျးတှရေဲ့ စှမျးဆောငျနိုငျစှမျးတှအေားလုံးကို ရိုကျခြိုးပွီး Gaming Phone ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုပွီး ပွလိုကျသလိုပါပဲ။ စတိတျစငျတဈခုလုံးကို လကျခုပျသံတှနေဲ့ ပွညျ့သှားစခေဲ့တာပါ။
အဲ့ဒီနောကျပိုငျးမှာ Akhayar-Tech အနနေဲ့ Asus ROG Gaming Phone ကို အနီးကပျကိုငျသှယျစမျးသပျခှငျ့ရရှိခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီအခြိနျမှာလညျး တကယျကို စှမျးဆောငျရညျအကွမျးစား Gaming Phone တဈခုရဲ့ ခံစားမှုကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။
အရငျဆုံး Hand-on Experience ကို မပွောခငျ Asus ROG ဖုနျးအကွောငျး သိပွီးဖွဈတဲ့သူတှရေော၊ မသိသေးတဲ့သူတှရေောအတှကျ Asus ROG Phone ရဲ့ Specifications တှကေို အနညျးငယျအရငျပွောပါမယျ။
စှမျးဆောငျရညျပိုငျးကို အလေးပေးတဲ့ Gaming Phone တဈခုဖွဈတဲ့အတှကျ Asus ROG Phone က လကျရှိမှာ အမွနျဆုံးဖွဈနတေဲ့ Qualcomm Snapdragon 845 Processor ကို အသုံးပွုထားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ထူးခွားတာက Processor ကို 2.96Ghz အထိ Overclocked ပွုလုပျထားတာပဲဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ SD 845 ဖုနျးခငျြးယှဉျမယျဆိုရငျတောငျ Asus ROG Phone က ပိုပွီး မွနျဆနျနမှောပါ။ ဒါကလညျး Qualcomm SD 845 သုံးထားတဲ့ဖုနျးတှထေဲမှာ ပထမဆုံးပါ။ RAM အနနေဲ့ 8GB DDR4 ပါမှာဖွဈပွီးတော့ Internal Storage ကို 128GB ဒါမှမဟုတျ 512GB ဆိုပွီး ထုတျလုပျမှာဖွဈပါတယျ။ Asus သာ ROG Phone ဖုနျးကို ဈေးကှကျအနှံ့မှာ ရောငျးခမြယျဆိုရငျ အခု ROG Phone က ပထမဆုံး 512GB Storage နဲ့ Mass Production ဖုနျးတဈခုဖွဈလာဦးမှာပါ။
Asus က ပွောသှားသလိုပဲ Gaming Phone တဈလုံးမှာ Performance တငျမကပဲ Visual ပါ ကောငျးမှနျနဖေို့လိုအပျပါတယျ။ အရငျက Razer Phone မှာ 120Hz Refresh Rate ကိုအသုံးပွုလာတာကိုတှခေဲ့ရပမေယျ့ LCD Panel ဖွဈနတေဲ့အတှကျ AMOLED တှလေိုမြိုး ကောငျးမှနျတဲ့ Visually Appealing မဖွဈခဲ့ပါဘူး။ အခုအခြိနျမှာတော့ Asus ကနေ ROG ဖုနျးမှာ AMOLED Panels တှအေပျေါယခငျက ယူဆထားတဲ့ အရာတှကေို အကုနျလုံးရိုကျခြိုးပဈခဲ့ပါတယျ။
ဘာကွောငျ့လဲ? Asus ROG Phone ရဲ့ Display က လကျရှိဈေးကှကျအတှငျးမှာ ရှိနတေဲ့ စမတျဖုနျးအမြားစုလိုပဲ 6″ Full HD+ 18:9 Display ပါ။ ဒါပမေယျ့ AMOLED Panel ကို အသုံးပွုထားပွီးတော့ လကျရှိ AMOLED Display သုံးထားတဲ့ ဘယျဖုနျးမှာမှ မရရှိနိုငျသေးတဲ့ 90Hz Refresh Rate ကို ရရှိနအေောငျ ပွုလုပျပေးထားတာပါ။ ဒါတငျမဟုတျသေးပဲ HDR Support ၊ 1ms Response Time တှအေပွငျ Color Accuracy ကလညျး 108% DCI-P3 ရှိနတောပဲဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ လကျရှိမှာ စှမျးဆောငျရညျအမွငျ့ဆုံး AMOLED Display တဈခုဆိုရငျလညျး မှားမယျမထငျပါဘူး။
ကနျြတဲ့ Gaming အတှကျအရေးကွီးတဲ့ Features တှအေနနေဲ့ကတော့ 4000mAh Battery ကိုမှ ဖုနျးကို Heat မတကျအောငျ အားသှငျးပေးနိုငျတဲ့ Asus HyperCharge နညျးပညာ၊ QC 4.0+ Support ၊ USB Power Delivery Fast Charging စတဲ့ နညျးပညာတှေ၊ Gigabit Download Speed အထိ Support ပေးတဲ့ Wi-Fi 802.11ad ၊ Dual Front Facing Stereo Speaker with Smart Amplifier ၊ DTS HeadphoneX 7.1 Virual Surround Sound Support ၊ Bluetooth 5.0 ၊ Fingerprint Scanner ၊ NFC နဲ့ Bluetooth 5.0 စတဲ့ နညျးပညာတှေ အပွညျ့ကို ပါဝငျနတောပါ။
Camera ကတော့ Asus ROG Phone ရဲ့ အဓိကအားသာခကျြတော့မဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ Asus က 12MP + 8MP (120° Wide Angle) Dual Camera စနဈကို နောကျကြောဘကျမှာတပျဆငျထားပွီးတော့ အရှဘေ့ကျ Selfie Camera ကတော့ 8MP တပျဆငျထားပါတယျ။ Pre-production Model ဖွဈနသေေးတဲ့အတှကျ ကငျမရာပိုငျးကိုတော့ သခြောမပွောနိုငျသေးပမေယျ့ Augmented Reality ကို Support လုပျတဲ့ Camera စနဈဖွဈတယျဆိုတာကတော့ သခြောပါတယျ။
Specifications ပိုငျးတှကေို ပွောပွီးသှားတဲ့အခြိနျမှာ ဘယျအရာတှကေ Asus ROG Phone ကို အကောငျးဆုံး Gaming Phone ဖွဈတယျလို့ ပွောနိုငျတယျဆိုတဲ့ Hands-on Experience ကို မြှဝသှေားပါမယျ။
အရငျဆုံး စစခွငျး ROG Phone ကို ကိုငျကွညျ့လိုကျတဲ့အခြိနျမှာ ဒီဖုနျးက Premium Flagship ဖုနျးဖွဈပွီးတော့ Gaming အတှကျ ရညျရှယျတယျဆိုတာက သိသာနပေါတယျ။ ဖုနျးရဲ့ နောကျကြောဘကျမှာ ရှိတဲ့ ROG Logo ၊ ဒီဇိုငျးနဲ့ လိုကျဖကျအောငျ ဘယျမှာမှ မတှရေ့သေးတဲ့ Fingerprint ပုံစံနဲ့ ကငျမရာ ဒီဇိုငျးတှကေ ROG Gamers တှတေငျမဟုတျပဲ Gaming Phone တှကေို စိတျမဝငျစားတဲ့သူတှကေိုတောငျ စှဲဆောငျနိုငျပါတယျ။
ဒီဇိုငျးအပွငျ Asus ROG Phone ကို အကောငျးဆုံး Gaming Phone လို့ပွောလို့ရသှားတဲ့ အခကျြ ၃ ခကျြရှိပါတယျ။
အရငျ ပထမဆုံးတဈခုကတော့ သေးငယျတယျဆိုပမေယျ့ စမျးသပျအသုံးပွုကွညျ့ပွီးတဲ့အခြိနျမှာ တကယျကို ကှဲပွားသှားစတေဲ့အခကျြတှပေါ။ အဲ့ဒါက Ultrasonic AirTriggers နဲ့ Advanced force-feedback haptics စနဈတှပေဲဖွဈပါတယျ။ Ultrasonic AirTriggers ဆိုတာက ဖုနျးကို Controller သီးသနျ့တပျစရာမလိုပဲ Controller တဈခုနဲ့ ဆော့ကစားနရေသလို ဖုနျးရဲ့ ထောငျ့တှကေို ထိပွီး ခလုတျအနနေဲ့ ထားနိုငျတဲ့ Function ပါ။ Advanced force-feedback Haptics Engine ကလညျး Vibration ကို ဂိမျးထဲမှာ Immersive ဖွဈသှားအောငျ ဆောငျရှကျနိုငျတာကို တှရေ့ပါတယျ။
ဒုတိယတဈခုကတော့ ပိုပွီး လကျတှကေ့ပြါတယျ။ ဖုနျးကို ဂိမျးအကွာကွီးဆော့နလေို့ ဖုနျးပူလာပွီး ဆကျမဆော့နိုငျတော့ပဲ ဖုနျးကို ခထြားလိုကျရတာ၊ ဒါမှမဟုတျ Air-con အောကျ၊ ပနျကာရှမှေ့ာ သှားပွီးဆော့ဖူးကွမှာပါ။ အဲ့ဒီအတှကျ Asus က ROG Phone မှာ GameCool Vapor-chamber Cooling System ကို အသုံးပွုထားတယျ။ ဒါတငျမကသေးပဲ AeroActive Cooler ကိုလညျး ထညျ့သှငျးပေးထားပါတယျ။
အခု AeroActive Cooler က ဘာလုပျပေးမလဲဆိုရငျ ROG Phone ရဲ့ ဘေးဘကျမှာပါဝငျတဲ့ Side Port ကနေ ခြိတျလိုကျပွီးတော့ Cooler မှာပါတဲ့ Fans က ဖုနျးရဲ့ Heat တကျတာတှကေို ဖယျရှားပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ၊ Fan Speed ကိုလညျး ဖုနျးကနပေဲ ထိနျးခြူပျနိုငျဦးမှာပါ။ ဒါက Laptop တှမှော Cooling Fan ခံသလိုပဲ ရိုးရှငျးပွီးတော့ အလှနျနညျးလမျးကတြဲ့ Heat ဖွရှေငျးနညျးပါ။ ဒါတငျမကသေးပဲ AeroActive Cooler ကို တပျလိုကျပွီဆိုတာရငျ ဖုနျးရဲ့ ဘေးဘကျအလယျကနေ အားသှငျးနိုငျတဲ့ USB Type C Port နဲ့ 3.5mm Audio Port တှပေါ အပိုရရှိဦးမှာပါ။ အဲ့ဒီအတှကျ ဂိမျးဆော့နရေငျ သီခငျြးနားထောငျတာ၊ ဖုနျးအားသှငျးနရေငျလညျး လကျက အောကျမှာ ရူပျနတေော့မှာမဟုတျပါဘူး။
နောကျဆုံးတဈခုကတော့ Accessories တှပေါ။ Asus က ROG Phone နဲ့ တှဲသုံးနိုငျတဲ့ Accessories တှကေိုပါ တပါတညျးမိတျဆကျသှားခဲ့ပွီး ဒီအတိုငျး သာမနျ Joystick တှတေငျမဟုတျပဲ တျောတျောလေးကို အလားအလာရှိတဲ့ Accessories တှပေါ ထုတျလုပျလာတာဖွဈပါတယျ။
အခု Accessories တှကေတော့ TwinView Dock ၊ Mobile Desktop Dock နဲ့ Gamevice Controller with WiGig Dock တှပေဲဖွဈပါတယျ။
အခု Accessories တှထေဲမှာ စိတျဝငျစားဖို့အကောငျးဆုံးကတော့ TwinView Dock ပဲဖွဈပွီး အဲ့ဒါက ROG Phone ကို တူညီတဲ့ နောကျထပျ 6″ 90Hz Refresh Rate AMOLED Panel တဈခုကို ထပျပွီး တပျဆငျပေးလိုကျသလိုပါပဲ။ အဲ့ဒီအတှကျ Screen တဈခုမှာ ဂိမျးဆော့နရေငျး တဈခုမှာ စာရိုကျနတော ဒါမှမဟုတျ ဂိမျးတဈခုထဲကိုပဲ အောကျဖကျက Display မှာဆော့နပွေီး အပျေါက Display မှာ Map ဖှငျ့ထားတာ စတဲ့ Cheat လုပျတယျလို့တောငျပွောနိုငျတဲ့ Features တှကေို သုံးနိုငျမှာပါ။
Mobile Desktop Dock ကတော့ Samsung Dex လိုမြိုး Desktop အနနေဲ့ ပွောငျးလဲပေးတာဖွဈပွီးတော့ Gamevice Controller တဈခုနဲ့ WiGig Dock ကတော့ ကိုယျ့ဖုနျးမှာ ဆော့ကစားနတောကို Wi-Fi ကနေ Streaming ပွုလုပျပေးဖို့ပဲဖွဈပါတယျ။
Asus ဟာ အခု ROG Phone ကို ရောငျးခမြယျ့အခြိနျကို အတိအကပြွောကွားထားခွငျးမရှိသေးပမေယျ့ ဈေးနှုနျးအနနေဲ့ကတော့ ဒျေါလာ ၁၀၀၀ (မွနျမာငှေ ၁၃ သိနျး) ဝနျးကငျြရှိမယျလို့ ခနျ့မှနျးထားကွပါတယျ။ ဒါက ဖုနျးတဈခုထဲအတှကျဆိုရငျတော့ လကျရှိ Flagship ဖုနျးတှထေကျတောငျ မြားပွားနတေယျဆိုပမေယျ့လညျး Asus ဟာ Gaming အတှကျကို သိသိသာသာ စှမျးဆောငျရညျတဈခုထဲတငျမဟုတျပဲ Display ၊ Features တှေ ၊ 512GB Storage ၊ ဒါ့အပွငျ Accessories တှကေိုပါ လုံးဝ အစှမျးကုနျကနျ့သတျခကျြတှကေို ဖယျရှားခဲ့ပွီးတော့ လကျရှိမှာ အကောငျးဆုံး Gaming Phone ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာကို ပွသသှားခဲ့တာပါ။
အခု Asus ရဲ့ ROG Phone ကို စမျးသပျကွညျ့ပွီးတဲ့အခြိနျမှာ ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ မေးခှနျးတဈခုက ခေါငျးထဲမှာ ကနျြနခေဲ့ပါတယျ။
“Gaming Phone တှကေ အခုလိုမြိုး သာမနျ Flagship တှနေဲ့ ယှဉျရငျတောငျ လုံးဝကှာခွားသှားတဲ့ စှမျးဆောငျရညျရှိနပွေီ… ဒါပမေယျ့ လကျရှိ Mobile Games တှအေတှကျ လုံးဝ Overkill ဖွဈနတေဲ့ Asus ROG Phone ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျအထိ လိုအပျတဲ့ Console အဆငျ့ AAA Title Mobile Game တှရေဲ့ အနာဂတျကရော ဘယျလိုဖွဈလာမလဲ?”